राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठ र गौतम मन्त्री बन्न पाउँलान् ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Editor-Picks राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठ र गौतम मन्त्री बन्न पाउँलान् ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् : वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् आचार्य
श्रेष्ठ र गौतमलाई मन्त्री बन्न कानुनले रोक्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् ज्ञवाली
यो पनि पढ्नुहोस कोरोना उपचारबाट पछि हटेको सरकारको स्पष्टोक्ति
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् । गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए ।
काठमाडौं । दोलखा सिंगटीकी ४२ वर्षिया पम्फा थापाको छोरीको मुटुको उपचारका लागि राष्टिय बाल अधिकार परिषद्ले २५ हजार नगद सहयोग गरेको छ । कोरोना महामारीपछि खुलामञ्चमा...
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - October 17, 2020
तुलसीपुर । राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले पश्चिमाहरुद्धारा धार्मिक आक्रमण तिब्र पारिएको बताएकी छन् । पैसा दिएर क्रिश्चियन धर्ममा लैजाने कार्यलाई पश्चिामा एजेन्टहरुले तिब्र...
प्रशासन र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, नागरिक मर्कामा
हुमाकान्त पोखरेल - May 5, 2020
गुल्मी । ‘गाउँमा मुटुरोग लागेको बिरामीलाई समेत जिल्लाका एम्बुलेन्सले विभिन्न बाहना बनाएर अस्पताल लैजान मानेनन ।’ धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसिथोकस्थित खहरे स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अर्जुन...
भर्खरै टेनिस रोका - May 9, 2020
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - June 18, 2020
काठमाडौं । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि चलचित्र उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन । यसैक्रममा छोटा नेपाली चलचित्रको निर्माण क्रम भने बढेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बाबुरामकाे मुद्दा, जनलोकपाल गठन नगरी सुखै छैन
बिचार राजधानी संवाददाता - August 1, 2020
बन्दाबन्दी खुकुलो पारिएसँगै काठमाडौंमा कोरोना महामारीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । देशव्यापी हुँदै गएको कोरोना संक्रमणको अनुपातमा राजधानी सहरमा अनपेक्षित परिणाम देखापर्दै जानु...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - August 7, 2020
प्रदेश सुजीतकुमार झा - February 12, 2020
जनकपुरधाम । धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका सिमराढीको अजय मुखियाको घरमा विहेको तयारी चलिरहेको थियो । पाहुनाहरु पनि आइसकेका...
यो पनि पढ्नुहोस बाँस्कोटामाथिको मुद्दा तामेलीमा राख्ने अख्तियारको तयारी